Fitsarana Ambony any Amsterdam: An'i Ukraine ny Scythian Gold
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Fitsarana Ambony any Amsterdam: An'i Ukraine ny Scythian Gold
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Kolontsaina • fanabeazana • Entertainment • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Okraina
Fitsarana Amsterdam: An'i Ukraine ny fanangonana volamena Scythian.
Tamin’ny Desambra 2016, namoaka didy ny Fitsaram-paritr’i Amsterdam fa haverina any Okraina ireo harena volamena Skytianina araka ny lalàna holandey sy ny fitsipika iraisam-pirenena. Tamin'ny volana martsa 2017, nametraka fitoriana momba ny fanapahan-kevitra ny tranombakoka Crimea.
Namoaka didy ny fitsarana holandey fa tokony hatolotra an'i Okraina ny fanangonam-bolamena Scythian.
Ny fanangonam-bolamena Scythian dia nanapa-kevitra ho anisan'ny lova ara-kolontsainan'ny Fanjakana Okrainiana.
Nifarana ny adidin'i Allard Pierson Museum hamerina ny sombin-tsarin'ny tranombakoka any amin'ny tranombakoka Krimeana.
Nanambara androany ny mpitsara filoha Pauline Hofmeijer-Rutten fa ny Fitsarana Ambony any Amsterdam dia nanapa-kevitra fa ny Volamena Scythian Ny fanangonana dia ampahany amin'ny lova ara-kolontsain'ny Fanjakana Okrainiana, ary tokony hatolotr'i Allard Pierson Museum ho an'ny Tahirim-bolan'ny Fanjakana ao Okraina.
"Namoaka didy ny Fitsarana Ambony any Amsterdam fa ny Allard Pierson Museum dia tsy maintsy manolotra ny 'Harena Krimeana' ho an'ny Fanjakana Okrainiana," hoy i Hofmeijer-Rutten, ary nampiany fa ireo artifacts dia "ampahany amin'ny lova ara-kolontsain'ny Fanjakana Okrainiana" ary “An'ny ampahany ho an'ny daholobe ao amin'ny Tahirim-bolan'ny Mozea-panjakana any Okraina."
Nilaza koa ny fitsarana fa tapitra “ny adidin’ny Allard Pierson Museum amin’ny famerenany ireo sombintsombiny ao amin’ny tranombakoka Krimeana”.
The Volamena Scythian fanangonana zavatra mihoatra ny 2,000 no hita tao amin'ny Mozean'i Allard Pierson ao amin'ny Oniversiten'i Amsterdam teo anelanelan'ny Febroary sy Aogositra 2014. Taorian'ny fanakambanan'i Rosia an'i Crimea tamin'ny Martsa 2014, nipoitra ny tsy fahazoana antoka momba ny fanangonana satria samy nilaza ny fampirantiana i Rosia sy Okraina. Amin'io lafiny io, ny Oniversiten'i Amsterdam dia nampiato ny fanolorana ny fanangonana mandra-pahatongan'ny fifandirana ara-dalàna na ny fifandirana amin'ny andaniny.
Tamin’ny Desambra 2016, namoaka didy ny Fitsaram-paritr’i Amsterdam fa haverina any Okraina ireo harena volamena Skytianina araka ny lalàna holandey sy ny fitsipika iraisam-pirenena. Tamin'ny martsa 2017, CrimeaNametraka fitoriana ny tranombakoka manohitra ny fanapahan-kevitra.
Tamin'ny Martsa 2019, ny Fitsarana Ambony any Amsterdam dia namadika ny fanapahan-kevitry ny fitsarana distrika saingy nanemotra ny didim-pitsarana momba ilay raharaha, nangataka ireo antoko mba hanome antontan-taratasy fanampiny.